mpanamboatra fantsom-boaloboka, mpamatsy - orinasa mpanamboatra fantsom-bongo silika any Sina
Silipo Intercooler Turbo Hose Kit Silipo Radiator Hose Kits dia natao hanoloana ny fantson-tsolika OEM. Kit ny fantsom-panafanana coolant dia azo ampiasaina ho an'ny motorsports sy ny fampiasana fiara isan'andro. Ny fantsom-pandrefesana radiatera dia vita amin'ny silipo avo lenta be dia be ary nohamafisina tamin'ny polyester avo lenta izay mampihena ny mety tsy fahombiazan'ny singa ary ahafahana mitazona ny mari-pana sy ny tsindry avo kokoa miaraka amin'ny fahatokisan-tena tanteraka Silicone Air Intake Tube / Turbo Inlet Silicone Air Intake .. .
Ny fantsom-pandrefesana dia ampiasaina amin'ny kamio, Mercedes-Benz, VOLVO, SCANIA, RENAULT, MAN, IVECO, DAF sns. Mampitombo ny herinaratra azo avy amin'ny famindran-toerana ny maotera ary koa mamorona ampahany lehibe amin'ny paikady fanaraha-maso ny motera izay mikendry ny hihaona amin'ny lalàna mifehy ny famoahana entona mandrehitra. DAF21312237 VOLVO1665971 VOLVO3183620 VOLVO8149800 Ho an'ny ambony c ...